Buddhist Circuit Of Odisha Tour | Dana: + 91-993.702.7574 yekubatsira
Odisha mazuva ano ari kuve chiitiko chikuru chekushanyirwa. Zviuru zvematemberi, tsika netsika dzezvigaro pamwe chete nekunaka kwemasango uye Wildlife njodzi inounza zvakawanda zvekukwezva vatashanyi. Pakati peizvi zvose, Buddhist Circuit Of Odisha Tour yava kunyanya kufarirwa. Zviuru zvezvakanaka zvekare Zvifananidzo zveBhudha varipo munzvimbo dzakasiyana-siyana muhurumende. Bhudhist Circuit Of Odisha Tour inobatsira vanhu kuwedzera ruzivo rwavo pamusoro pekare yeBuddhist tsika yeOdhaya uye neyekare yeBuddhist Temples yaOdhaisha. Bhudhist Circuit Of Odisha Tour inokosha muBuddha mune zvepurasitiki muOdhiisha inomiririra Bodhisattva Avalokiteshvara mumhando dzakasiyana dzakadai saPadmapani, Lokeshvara, Vajrapani. Mumwe anogona kuwana zvifananidzo zveTara, Manjusri, Amoghasiddhi nezvimwewo munguva ino. Imamziyamu yeLalitgiri inochengetedza zvikomborero zvechiBudhisattva mairi. Mimwe mizhinji yakawanda yakadaro inowanikwa pedyo neUdayagiri uye Ratnagiri. Bhudhist Circuit Of Odisha Tour inoita kuti iwe uongorore dzose idzi dzakanaka nzvimbo muOdhaisha.
ZUVA 01: ARRIVAL BHUBANESWAR
Paunosvika kuBhubaneswar Airport / Railway Station, enda kune hotera. Masikati mashanyira kuNandankanan Zoo (Yakasimbiswa neMuvhuro). Usiku huno kuBhubaneswar.
Mushure mekudya kwekudya kwemazuva ekutanga kushanyira temberi-Lingaraj, Rajarani, Parasurameswar, Mukteswar, & Bhaskareswar Temple kubva 7th kusvika 12th yezana remakore AD. Masikati mashanyi kuKhandagiri & Udayagiri Jain mapango ari muzana remakore rechi18 BC. Usiku huno kuBhubaneswar.
ZUVA 03: BHUBHESHARI - RATNAGIRI - UDAYAGIRI - LALITGIRI
Mushure mekudya chamangwanani Zuva rose zuva rekuenda kuRaknagiri, Udayagiri & Lalitgiri Buddhist Monasteries & Stupas. Usiku huno kuBhubaneswar
ZUVA 04: BHUBANESWAR - NUAPATNA - JORANDA - BHUBANESWAR
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaNuapatna kugadzira musha, Sadeibarini Dhokra kugadzira musha & Mahima Cult paJoranda. Usiku huno kuBhubaneswar.
ZUVA 05: BHUBHESHARI - KONARK - PURI - BHUBANESWAR
Mushure mekudya kwekudya kwekudya Kwekudya kwekudya Puri kuenda kuPuri enzira kuDhauli (Shanti Stupa), Pipili (Inoshandiswa mubasa remabasa), Konark (Sun Temple) uye Chandrabhaga Beach. Manheru ekushanyira Ishe Jagannath Temple (Vasinga-vaHindu havabvumirwi mukati memutemberi), Raghurajpur (peji Village). Usiku huno kuBhubaneswar.
ZUVA 06: DEPARTURE